ICottage yeNkundla - Ubunewunewu entliziyweni yeYorkshire
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPaula
Beka kumda weenduli zeHowardian kunye nokujula kwelitye ukusuka eYorkshire Dales, eNorth Yorkshire Moors kunye noNxweme oluseMpuma, zininzi izinto ekufuneka zenziwe kwaye uzibone.
Le ndlu intle yelizwe, iguqulwe isuka kwiShedi yeNkomo endala, iye yalungiswa ngononophelo ukuze ibandakanye umlinganiswa omninzi, iimpawu zoqobo kunye nomoya opholileyo, wasekhaya.
Ifakwe kwisitrato esithe cwaka kwilali entle, indawo yokusela yalapha kukuhamba imizuzu emi-5 kwaye idolophu ekufutshane yentengiso yimizuzu emi-5 ngemoto.
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo, inesixhobo sokuhlamba izitya, imicrowave, itoaster, iketile kunye nesikhenkcisi sefriji. Kukwakho neAga enokuthi ilayite ukuze isetyenziswe ngeendleko ezongezelelweyo (£5 ngobusuku ngabunye). Kwabo bangaqhelananga neAga, kukwakho ne-oveni yombane/isitovu segesi.
Indawo yokuphumla iphangalele, ineesofa ezimbini (enye ibhedi yesofa ephindwe kabini), itafile yekofu kunye nesitendi sikamabonakude wepine esinomabonakude onemibala engama-28”. Kukho isitovu segesi esisetwe ngaphakathi kwendawo ethandekayo yealcove, enokuthi isetyenziswe ukongeza kwi-Underfloor yokufudumeza. Kukho i-Wi-fi yasimahla kwi-Cottage, kwaye i-TV yakhelwe kwi-Freeview, kunye nomdlali we-Blu-ray owahlukileyo, kunye nokukhethwa kweeDVD's/books/games/CDs ukuze uzonwabele. Igumbi lokuphumla likhokelela kwigumbi elahlukileyo lelanga, eliligumbi elithandekayo elijonge idrive kunye negadi kwaye linokusetyenziswa njengegumbi elizolileyo okanye njengeofisi, njengoko linedesika entle kunye nesitulo, kunye nendawo yokuhlala.
Igumbi lokuhlambela elisezantsi libonisa ishawari eyakhelweyo, enesihlalo sokutsalela phantsi kunye ne-handrail kwabo bangenakho. Kukwakho nomatshini wokuvasa kunye nesomiso esahlukileyo, ukuba siyimfuneko.
Igumbi lokulala elikhulu lixhotyiswe ngebhedi elingana neKumkanikazi, lihonjiswe kakuhle ngesipili esigcweleyo, isixhobo sokomisa iinwele kunye ne-TV elawulwa kude.
Igumbi lokulala lesibini elipholileyo linebhedi encinci ephindwe kabini, itafile yokunxiba kunye nesipili.
Igumbi lokuhlambela elikumgangatho ophezulu linemvakalelo ethandekayo epholileyo, enebhafu enobungakanani obugcweleyo kunye nempompo yomxube weshawari.
Indawo yokulala kuwo omabini amagumbi okulala ikwindawo enkulu enegalari.
Igadi ibekwe kwipatio kunye nengca, enemithi evuthiweyo kunye nezihlahlana, kwaye yindawo ethandekayo yabucala eneendlela ezahlukeneyo zokuhlala ezinamachaphaza. Bukela iintaka ezondla kwi-feeders kwaye ujabulele izandi zelizwe kunye nedolophana njengoko uphunga ikofu yakho yasekuseni (okanye i-tipple of choice!).
Ukupaka iimoto ezi-2 kuyafumaneka kwi-private drive kunye nerack yebhayisekile ukukhusela nayiphi na imijikelo.
Idolophu yentengiso yasekhaya yaseMalton yaziwa ngokuba yiYorkshire's Food Capital - enentengiso yokutya yenyanga nge-2nd ngoMgqibelo wenyanga nganye kunye neziganeko ezininzi zeFlagship unyaka wonke, kubandakanya iMarathon du Malton, iBeertown kunye neMeadowfest, eyethu iBoutique Music Festival.
Kukho izindlu ezininzi ezinembali kule ndawo, eyona idumileyo yiCastle Howard, kodwa ikwaDuncombe Park, iScampston, iHovingham kunye neeHolo zeNunington, ezineegadi ezintle kunye noyilo olumangalisayo.
Ukuba uyathanda ukuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile, ihlathi laseDalby kukumgama omfutshane, kwaye intle yaseNorth Yorkshire Moors ibonelela ngembonakalo entle.
Ukuba unxweme lukhetho lwakho, iScarborough, iFiley, iWhitby okanye iRobin Hoods Bay zonke zifikeleleka ngokulula kwaye zibonelela ngeelwandle eziphumelele ibhaso kunye nokuhamba ngamawa.
Ekuhlaleni, i-zoo yaseFlamingoland kunye nepaki yomxholo inika imisebenzi kuyo yonke intsapho, njengoko i-Eden Camp, iMyuziyam yethu ye-2 yeMfazwe yehlabathi isekwe kwindawo yenkampu ye-POW yasekuqaleni. Kutheni ungabophelelekanga kuhambo oluya kwiMpelaveki yeMfazwe yonyaka ePickering ebanjwa rhoqo ngo-Okthobha.
IHelmsley yenye idolophu enembali yalapha ekhaya, kumganyana nje omfutshane wokuhamba-indawo yentengiso yindawo enabantu abaninzi, ineevenkile ezininzi kunye neendawo zokutya. Hamba-hamba ujikeleze idolophu, undwendwele iNqaba kunye nezitiya zayo / indawo yokugcina abantwana, okanye uthathe uhambo ngeenyawo kwibala leDuncombe Park kunye nepaki, okanye undwendwele indawo yokuqubha engaphandle ye-Yorkshire ekuphela kwe-25m eshushu.
Myself and my husband Neil both grew up in the area, and now that our children are older, we are left with a mad Basset Hound and a crazy Dachshund puppy to keep us on our toes! We have very high standards when it comes to holiday accommodation, having stayed in lots of hotels over the years, and have worked hard to incorporate everything we have learned over the years into our cottage. We look forward to welcoming guests from near and far and hope you enjoy your stay with us.
Myself and my husband Neil both grew up in the area, and now that our children are older, we are left with a mad Basset Hound and a crazy Dachshund puppy to keep us on our toes! We…
Umamkeli wakho akahlali kwisiza kodwa unokuba khona ukuze akubulise ukuba uyafuneka. Sihamba ngemoto imizuzu eli-10 kwaye singaqhagamshelwa ngomnxeba ngayo nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Swinton